Iyo scooter inobhururuka kubva muvhiyumu Kudzokera Kumangwana uye kufambira mberi kwayo | Ndipei zororo
Sangana neiyo inobhururuka scooter kubva Kudzoka Kune Ramangwana
Gabriela moran | | Cine, Sayenzi yekunyepedzera firimu
Zvirokwazvo iwe wakamboona kana, zvirinani, kunzwa nezve akabudirira firimu trilogy Kudzokera Kumangwana. Firimu rekutanga rakaburitswa muna 1985 uye rakave rakabudirira kwazvo pagore. Kubudirira kwazvo kwakange kwakakura zvekuti kwakasarudzwa kuburitsa yakateedzana makore mana gare gare naSteven Spielberg semugadziri! Zvaive en iyi bhaisikopo repiri panobhururuka sikuta kubva kubhaisikopo Kudzokera kuRamangwana 2 inoonekwa.
Aya mafirimu matatu aive nyeredzi Michael J Fox saMarty McFly naChristopher Loyd sa eccentric musayendisiti Emmet Brown. Imwe firimu yakaisa vanonyanya kutaurwa munzvimbo dzakasiyana nekuda kweiyo kufamba kwenguva paDeLorian. Pasina kupokana, iyo trilogy inomiririra kufambira mberi kwakakosha musainzi fikisheni yemhando kunyanya. Asi pamusoro pezvose, chikamu chechipiri chakaunza tarisiro huru maererano nezveramangwana uye nekuvandudzwa kwetekinoroji kwaizovepo, yakadaro ndiyo kesi yemudhudhudhu mufirimu. Verenga pamusoro kuti uwane zvese nezve ichi gadget nyowani uye chii chitsva nezvazvo!
1 Iyo scooter inobhururuka kubva muvhiyumu Kudzokera kuRamangwana 2
2 Kudzokera kune zvazvino… Chirongwa chemakumi matatu emakore akateedzana!
3 Sikuta inobhururuka kubva mufirimu Kudzokera kuRamangwana yatove chokwadi here?
4 Chii chekutarisira izvozvi?
5 Scooter dzazvino
Iyo scooter inobhururuka kubva muvhiyumu Kudzokera kuRamangwana 2
Iye protagonist ndiye Marty: wechidiki ane makore gumi nemanomwe anogara achienda kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe pachikoro chake uye kuti zvakare ari chikamu cheboka remimhanzi rechikoro kwaanoridza gitare. Ane musikana anonzi Jennifer uye shamwari yake yepamoyo Emmet, musayendisiti anomutora pakufamba kwenguva uye anozivikanwa sa "Doc."
Iyi firimu inotanga muna 1985 uye ma protagonists anoenda kune ramangwana makore makumi matatu. Ivo vanofanirwa kupedzisa basa muna Gumiguru 21, 2015!
Kudzokera kuRamangwana 2 ndeimwe yemafirimu akabudirira kwazvo mune sainzi ngano genre. Iwo chaiwo mhedzisiro ainakidza kwenguva yavo! Chokwadi chaicho kure semifananidzo yeXNUMXD, mota dzinobhururuka uye scooter yakashandiswa naMarty yakasimudzwa.
El inobhururuka sikuta kubva kubhaisikopo Back to the future yakava icon kune vateveri ve trilogy. Kusangana kwaMarty nenzira dzakadai dzekufambisa kwakangoitika netsaona, sezvo yaive nzira yaaishandisa kukunda muhondo mune chimwe chikamu chechirongwa.
Kunze kwenyaya yatinogona kutaura, tisingatyi kukanganisa, izvo chakanyanya kukosha chinhu mune ino firimu yaive chiratidzo icho ivo vagadziri vakaumba ramangwana. Iyi firimu inoratidza mhinduro inogoneka kumubvunzo wekusingaperi: ramangwana richange rakaita sei mune imwe nguva?
Kudzokera kune zvazvino… Chirongwa chemakumi matatu emakore akateedzana!
Remangwana ratibata uye gore ra2015 rasvika! Fans vanga vakamirira Mbudzi 21. Izvi, nekuti mune yechipiri firimu, ndiro raive zuva rakaratidzwa apo kusvika kwaMarty naDoc kunguva yedu kwaizoitika.
Kuchengeta makore makumi matatu, dzimwe nyika dzakaburitsazve mafirimu matatu mumitambo. A pamutemo meseji kubva Chiremba Emmet Brown kugadzirisa mafeni esaga uye inoratidzwa pazasi:
Iko kutarisira kwaive kwakakura sekushamisika kwakawanda kunogona kuitika. Waive mukana uyo makambani aigona kutora mukana uzere nawo! Izvi ndizvo zvazvakaitwa naNike, Pepsi naLexus. Iyi yekupedzisira mota kambani yakaratidza yekutanga prototype iyo inogona kufananidzwa neanozivikanwa anobhururuka sikuta kubva muvhiyumu Kudzokera kuRamangwana 2.
Sikuta inobhururuka kubva mufirimu Kudzokera kuRamangwana yatove chokwadi here?
Makambani akati wandei akagadzira prototypes kuti awane iyo modhi inoshanda nenzira iyo scooter mufirimu. Lexus, iyo inozivikanwa mota mhando ndeimwe yacho
Slide izita raLexus rechikoro chinobhururuka uye rinoyangarara mumhepo uye rinogona kutenderera pamusoro pevhu! Chigadzirwa chinoshandisa tekinoroji iripo: rinobva levitation. Ndokusaka, zvinosuwisa, isingashande pane chero nzvimbo, ndiko kuti, inogona kungotsvedza pamakwara nemagineti akakosha.
Slide scooter inoshanda nemvura senitrogen semafuta, pakuenzanisa. Saka kana sikuta yangodziya, inorasikirwa nevhi uye inoda kuzadzikiswa neitrogen. Ivhareji yekushandisa yeiyi inobhururuka sikuta ingangoita maminetsi makumi maviri. Lexus yakavakwa muCubelles, guta riri padyo neBarcelona, ​​nzira yakakosha kuitira kuti igoedzwa.
Iyi scooter inobhururuka Yayo haina kutengeswa, kwechinguvana ingori muenzaniso chete. Chekupedzisira, iyo mhando yakatora mukana mukugadzirwa kwetekinoroji kweSlide yayo uye chiitiko cheKudzokera KuRamangwana kuishandisa sekushambadzira kwemota dzayo.
Chii chekutarisira izvozvi?
Iwo makambani anoenderera mberi nekutsvaga nekudyara mukuwana iyo inodikanwa tekinoroji kuunza iyo yakamirirwa kwenguva refu inobhururuka sikuta kubva kubhaisikopo Kudzokera KuRamangwana.
Hendo ikambani iyo kwemakore akati wandei yakatanga chirongwa cheiyo inobhururuka sikuta iyo inogona kutengeswa. Kunyangwe iyo Hendo Hoverboard isingashandise mvura senitrogen, ichiri nemikana yekushandisa mukutanga kwayo.
Hendo akashandisa akaunganidzwa akaunganidzwa ayo aunza inonakidza huwandu hwemari. Chii chimwe yakaisa kutengesa zvimwe prototypes inokosha zviuru gumi zvemadhora ekuUS pachikoro!
Kutenda kutsvagisa nekusimudzira basa, Hendo akagadzira zviratidzo zvinoverengeka zvaakagadzirisa. Ndinovaratidza mumufananidzo unotevera:
Iyo trilogy yakaburitswa muma80s, nguva iyo iyo sikuta yainyanyo kufarirwa senzira yekufambisa nekutandara. Hapana aigona kufungidzira mukana wekuwana imwe iyo yakabhururuka! Zvirokwazvo chikamu chechipiri chetatu chakasimudza tarisiro mupfungwa dzevaoni. Zvimwe zvacho zvatove chikamu chehupenyu hwedu hwezuva nezuva uye zvimwe zvakangopfupika pakuve.
Chii chinogadzira chokwadi ndechekuti Chinangwa chemakambani mazhinji ndechekuparura scooter inobhururuka iine mabasa akafanana neaya anoshandiswa naMarty McFly.
Isu tine zvigadzirwa zviripo zvekutengesa uye izvo zvave kufarirwa kwazvo: Ndiri kureva iyo magetsi emagetsi uye kuti vakafemerwa nechakagadzirwa chemufirimu.
Ichokwadi kuti isu tiri kuswedera padyo nekuswedera! Zvinotaridza kuti kushamisika kunogona kuuya nekukurumidza kupfuura zvaitarisirwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » Cine » Sangana neiyo inobhururuka scooter kubva Kudzoka Kune Ramangwana
Mafirimu aunogona kutarisa paYouTube mahara (uye zviri pamutemo)